Qaadka | HIGIL
Posted on Axad, Oktoobar 12, 2008 by Jidhidhico	1 Faallo
Afeef: Is barbardhigga gabayada abwaanada si godan yaan midna loo eegin. Yaanna la cabiran waxaan meeshaba ku jirin. Annagu khaas ahaan, waxaan u aragnaa taariikh iyo aqoon korodhsi. Saas ayaanna idinka rajaynaynaa.
Qaadka ama Jaadka, kolba sidaad u taqaanno, waa qaxarka ugu culus ee ummadaha Geeska Afrika ama kuwa ku xeersan laf-dhabarta kala dhantaalay. Gaar ahaan ummada Soomaaliyeed, daan kastaba ha joogtee, waxaa lagu tiriyaa dadka ugu bahal-cunka badan Qaadka. Marka aannu kasoo gudubno aragtiyada maroorsan ee Qaadka usha u ahaya, waxaa xusid mudan in ay jiraan aqoonyahhano ammaba abwaanno Soomaaliyeed oo ka digay aaffada iyo wax-yeelada (guud ee bulsho ammaba tan gaar ee shaqsiyadeed ee) caafimaad iyo dhaqaale ee Qaadku xambaarsanyahay. Maanso ahaan, waxaa Qaadka cambaareeyay cambaareeyihii cadowga Soomaaliyeed ee C/laahi Suldaan ‘Timaccade’ (AUN), waxa uuna yidhi.
Dixriga qudhunku uma soo uro ee, waabu quudsadaaye
Qasaaraha dhexdana haadaan, layska qabanaynin
Qabyo weeye Soomaalidaay, qiiradaadaniye. (Qabyo)
Qaadku shaki maleh in caadadiisa la cibaadaystay. Dad aqoontu ku dheertahay ayaa fikirkooda qaadka ku cabiray sida qaadku nasiimo u leeyahay, taasina tahay faan sareeya. Abwaanku nolosha habkay marayso ayuu soo tabiyaa, taasina ceebi kama raacdee sharaf iyo taariikh guntan ayuu ku helaa—waa hadduusan ku dhagaroobin sharafta loo hayo. Waxaa jirtay in Maxamuud Dheeg — gabyaagii ka qaybqaatay silsiladii Hurgumo ee uu Khaliif Sheekh Maxamuud abudhka ka qaaday — ka hadlay Qaadka, kana yidhi asagoo jawaab waafiya u qadimayey gabaygii ‘Murgumo’ ee Khaliif qaybtiisii Qaadka ku saabsanayd:
Qayilaada aad nagu cayday iyo, qadada geedaysan
Ee aad adigu soo qaaday baan, kaa qancinayaaye
Qormo nabad ah ciidaydii oo, qabow anoo jooga
Markaan calankii meeluu qotomo, qun uga soo toosay
Markaan hawshii soo wada qabsaday, qabtii igu aadday
Ee aan qadeeyeen dhargay baan, qaadka iibsadaye
Qol dugsoon haddii lay goglay, iyo qaac barkimo taalo
Anagu qaayo geed[?] iyo xarrago, waan u qalannaaye
Waa qaniimad lagu dheeryahood, ka qadday maandhow e
Qayilaadu waa raaxo uu, qabo nin haystaaye
Waxaa iyadana isla meesha ka madhnayn in Qaadka iyo dhibaatooyinkiisa kala duwan maanso lagu cabiro. Waxaa labadaa gabay ee kore ka dambeeyay mid isagu Qaadka dhan walbood ka marto qoto-rifay. Gabaygan ood wada garanaysaan ayaa isagu wax ahmiyad ah, oo loogu xisho haba yaraatee, u bannayn Qaadka. Gabaygan waxaa unkay gabyaagii (AUN) Abshir Nuur Faarax (Abdhir Bacadle). Run ahaantii gabaygan ruuxii qaadka cuna, hadduun(haddayn)ba iska dayn, daraaddii wuu(way) iskaga yareen kar(t)aa; hadday sidaasu soconaynna, “qalbi rogan qiyaastu ma qabato” weeyi xaalku!
Gabaygii waxa uu abwaanku ku bilaabay:
Boqolaal qorshoo wada qabya ah, qaadow adigaa leh
Qoys dumaya qayliyo huruuf, qaadow adigaa leh
Qalbi qooqan qoora aan wax tarin, qaadow adigaa leh
Qardareeye kaadida qulquli, qaadow adigaa leh
Qalbi guban sigaar lagu qanciyo, qaadow adigaa leh
Macdan qubata hawshoon la qaban, qaadow adigaa leh
Hurda qarow ah soojeed qamqama, qaadow adigaa leh
Qaraabo iyo ehel aan la tabin, qaadow adigaa leh
Iska qari cid baa kugu qabsane, qaadow adigaa leh
Isqandiiri kana qoomamee, qaadow adigaa leh
Qosol iyo qamuunyo isku xiga qaadow, adigaa leh
Qandiga fuqurka iyo quus rageed, qaadow adigaa leh
Dad qamaama qayliyo dagaal, qaadow adigaa leh
Shaluu qaatay maantana qafaal, qaadow adigaa leh
Dhaliyara afkooduun u qoran, qaadow adigaa leh
Bisad ku quustay dabadeeda qabo, qaadow adigaa leh
Qarjaf sayntu inay kuu tiraa, qaadow adigaa leh
Qamiis walaf quluub aan xasilin, qaadow adigaa leh
Qoys laga dhixiyo qaaqla nimo, qaadow adigaa leh
Qaamuuska waxa cay ku qoran, qaadow adigaa leh
Deg deg loo qasaariyo shilqoran, qaadow adigaa leh
Qiso yaablohooy qarinayaan qaadow, adigaa leh
Qofka daa’imoo qiima dhaca qaadow, adigaa leh
Ku qasaar macaashkana ku qarow, qaadow adigaa leh
Magnad kugu qasbiyo qaac ibliis, qaadow adigaa leh
Hanti qaran qanaafiir ugee, qaadow adigaa leh
Qaatala ka Llaahuye adigaa, qaranka aafeeyay
Qaatala ka Llaahuye adigaa, qaranka aafeeyay.
Isha Gabayga: Baluugleey.com
Tags: Gabay, Qaadka, Soomaali. Bookmark the permalink.
Previous post ← “Soomaali baan ahay…”: Jaamac Kediye Cilmi
Next post “Casiisow Waa Mahaddaa” →
One thought on “Qaadka”
Khamiis, Nofeembar 28, 2013 12:39 B
Nin hooyadii ku qayloo qumaya dhaha qaadoow adaa leh qaadoow adaa leh
nin hooyadii inuu qaba mooda oo ku qamaama qaadaw adaa leh
nin hooyadii qadiyey xaqeegiina dafiray
nin hooyadii quudhsada oo aan qadarinayn qadoow adaa leh
nin habeenkii qarwaya oo isqoraraya qaadooow adaa leh